FSX Yakazara uye Yakakwana tsanangudzo yekugadzirisa mafaira
mubvunzo FSX Yakazara uye Yakakwana tsanangudzo yekugadzirisa mafaira
1 gore 5 mazuva apfuura #980 by DRCW
Izvi zvakapiwa neESP iyo yakagadzira hurongwa hweFSX. Iwe unoda kutarisa iyi yepaiti uye uine kopi mumagwaro ako.
nemashoko aya, denga rakanyatsova muganhu wekugona kwako kuchinja kune ndege yako uye mberi.
1 gore 5 mazuva apfuura #981 by Gh0stRider203
o, saka ini ndinogona kugadzirisa My 777 nevatsvaga? inotapira! ^ _ ^ lol
1 gore 5 mazuva apfuura #982 by Gh0stRider203
Ini chaizvoizvo ndine chinhu chimwe chete iwe unogona kukwanisa kundibatsira ...
Ndingaitei kuti ndiwedzere nzvimbo dzekupaka nzvimbo yekunze? Kunyanya, vamwe paKDFW pamberi peAmerican Airlines 'Maintenance Hangar #5 prnt.sc/ie8djp
1 gore 5 mazuva apfuura - 1 gore 5 mazuva apfuura #983 by DRCW
Iyi ndiyo imwe nzvimbo ini ndisina kunyatsotarisa muFSX, ini zvino ndiri kunyanya kushandisa P3Dv4 iyo yakamirira 64 bit ESP platform. Heanoi murayiridzo wevhidhiyo wandakawana iyo inogona kubatsira. Handina kuwana nguva yekuishandisa zvakadaro, asi yemavhidhiyo ose andakatarisa, uyu anoita seanotsanangura zvakanaka
Last edit: 1 gore 5 mazuva apfuura ne DRCW.
1 gore 5 mazuva apfuura #988 by DRCW
Heano muenzaniso wewe wejetsiti yejets autopilot yeCopp autopilot chikamu
Izvozvo zvinoshandiswa kuiswa kune = 1) 0 zvinoreva nhema uye 1 zvinoreva chokwadi, Unogona kuwedzera iwe'r injini Static_ Thrust = zvirongwa zvakare. Ini ndichange ndichigadzira chinyorwa panyaya iyi nekukurumidza.
Time chokusika peji: 0.215 mumasekonzi